Zaw Htet: 2007
Posted by Zaw Htet at 2:36 PM2comments:
Posted by Zaw Htet at 10:28 AM No comments:
ဒီသီချင်းက Rock Star Movie ရဲ. OST ပါ။
Steel Dragon's We all Die Young ပါ။
2001 ခုနှစ်က Movie ပါ။
အဲဒီအချိန်က ကျွန်တော်တို. ROCK ကို CRAZY ဖြစ်နေတဲ.အချိန်
ဒီ Movie ကြည်.ပြီး တော်တော် ရူးလိုက်ကြသေးတယ်။ LOL
Pantera, Metallica, Ozzy Osbourne, Slayer, Judas priest, Megadeth, Antrex, Supatra, Rage Against The Machine, Nine Inch Nails, Aerosmith, Kiss, Steel Dragon, Steve Vai, Van Halen, Nirvana, GreenDay, Blink-182, Weezer, Bush, REM,FooFighters, Eve 6, Guns n' roses, Soul Asylum, Lake Of Tears, Cradle Of Filth, Mindless Self Indulgence, The American Tragedy, Barabbas, Rammstien, The Smiths, Bitch And Animal, Jane's Addiction, Suzanne Vega, K's Choice, System ofaDown, Creed, Kittie, Veruca Salt, Violent Femmes, Static-X, Silverchair, Slipknot, Simon and Garfunkel,The Pixies, From Zero, Local H, Tapeworm, Meshuggah, Our Lady Peace, Tori Amos, Anorexia Nervosa, Human Waste Project, HIM, Procol Harum, Jack Off Jill, SevenDust, Marilyn Manson, Korn, The Murmurs, Radiohead, Tristania, Goo Goo Dolls, Puddle Of Mudd, Bullet for My Valentine...etc
Posted by Zaw Htet at 8:36 AM No comments:
စိတ္တံ ယဿ န ကမ္ပတိ။
အသောကံ ၀ိရဇံ ခေမံ၊
၁။ လောကဓံ တရားကြောင့် စိတ်မတုန်လှုပ်ခြင်း၊
၂။ လောကဓံ တရားကြောင့် စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုမရှိခြင်း၊
၃။ ကိလေသာ ကင်းခြင်း၊
၄။ ကြောက်စရာ ဘေးရန် မရှိခြင်း၊
Posted by Zaw Htet at 4:48 PM No comments:
မဟာဂန္ဓာရုံ ဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ
စိတ်ကောင်းရှိဖို့ က ပထမ။
စည်းကမ်းရှိဖို့ က ဒုတိယ။
ကျန်းမာဖို့ က တတိယ။
သန့် ရှင်းဖို့ က စတုတ္ထ။
အစားအသောက်တတ်ဖို့ က ပဉ္စမ။
အ၀တ်အစား တတ်ဖို့ က ဆဌမ။
အနေအထိုင် တတ်ဖို့ က သတ္တမ။
အသွားအလာ တတ်ဖို့ က အဌမ။
စကားလိမ္မာဖို့ က န၀မ။
စာတတ်ဖို့ က ဒသမ။
Posted by Zaw Htet at 4:46 PM 28 comments:
If I wereaWitch, I'll shrink you toatiny little thing and put you inasmall little bottle and I'll swollow that little bottle down my throat. I'll take it out when there is nobody around and I'll take care and protect you with all my might.
If I wereaMagician, I'll transform you intoalittle birdie and put u inacage and I'll admire you for the rest of my life and your life.
If I haveagun in my hand, I'll shoot you and bury you with my own bare hand.
I maybe sad for months and shed my tears, but I'll still be at peace because Dead One Does Not Cheat and Lie.
When I was madly in love with you, I gave you my all.
You dare to test my patient and snapped my limit.
If I can makeachoice, I'll Kill you with my own hand and I'll keep you in my heart for till the day I die.
Posted by Zaw Htet at 5:42 PM 1 comment:
Posted by Zaw Htet at 4:18 PM No comments:
Posted by Zaw Htet at 4:22 PM No comments:
I will try to stop you now from leaving
You won't be long
Posted by Zaw Htet at 11:25 AM No comments:
Listen here, because it’s who we (are)
(Do or die you'll never make me
Posted by Zaw Htet at 3:19 PM No comments:
အရာရာကိုစွန့်ကာ ယုံကြည်မှုတစ်ခုအတွက် တစ်သက်တာလုံး အံ့ဖွယ် တိုက်ပွဲဝင်သွားခဲ့။
ကျူးဘား တွင်တော်လှန်ရေးလုပ်။ အနိုင်ရ။ အစိုးရသစ်အဖွဲ့ တွင် အရေးပါသော အာဏာများကို ရခဲ့သော်လည်း ကျူးဘားမှ ထွက်ခွာခဲ့။
၁၉၆၀ တွင် တရုတ် နှင်. ဆိုဗီယက် နိုင်ငံများ မှအပြန် Guerrilla Warfare နှင်.Reminiscences of the Cuban Revolutionary War စာအုပ်များရေးသားခဲ.။
ကွန်ဂို နိုင်ငံ သို့သွားရောက်ပြန်၊ ၄င်းနိုင်ငံအတွက် ထပ်တိုက်ပေးခဲ့။
နောက် ဘိုလီးဗီးယား သို.ထပ်သွားပြန်၊ ဘိုလီးဗီးယား တွင်နောက်ဆုံး တိုက်ခိုက်ပေးခဲ့ရင်း အစိုးရ ကဖမ်းမိ။
၁၉၆၇ အောက်တိုဘာ ၉ ရက်တွင် ဘိုလီးဗီးယား အစိုးရ ၏လုပ်ကြံမှု ဖြင်.ကျဆုံး။
Download Guerrilla Warfare Ebook
Posted by Zaw Htet at 4:33 PM No comments:
What the fuck is wrong in this world ... Today?
Posted by Zaw Htet at 5:29 PM No comments:
Check William Shakespeare info:
Posted by Zaw Htet at 3:51 PM No comments:
(ဒီသီချင်းက .. ရောက်နေတဲ. သူငယ်ချင်း Thike Gyi အတွက်ပါ)
Hope... u r well... in....
Posted by Zaw Htet at 11:38 AM No comments:
Posted by Zaw Htet at 3:22 PM 1 comment:
သင်.လက်ထဲတွင် ဘာမှမရှိလဲ Positive Attitude ရှိရင်... သင်ဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်လာပါ လိမ်.မည်။
Posted by Zaw Htet at 10:04 AM No comments:
ဘာမှန်းမ သိဘူးဗျာ ဖိုးကျော်ရဲ. သီချင်း ခဏခဏ နားထောင်ဖြစ်နေ တယ်။
ဖိုးကျော်ရဲ. “သတိရနေမဲ. အခါတိုင်း”...... ဒီသီချင်း ကို “ဘိုဘို နဲ. ညီပုလေး” တို.လဲဆိုဖူးတယ်။
မှတ်မိတော.ဘူး ဘယ်အခွေလဲ ဆိုတာ။
Posted by Zaw Htet at 9:44 AM No comments:
(ဒီသီချင်းက “လေးဖြူ ရဲ. ခရီးအဆုံးထိ” သီချင်း လိုပဲ)
Posted by Zaw Htet at 8:30 AM No comments:
So then what do you see???
Posted by Zaw Htet at 4:09 PM No comments:
Look at this photo...!
U can see three monkeys or.... lol
anyway.. no big deal but , today i'm just received that photo from Wai Phyo and stick it to my blog...
Thanks Wai ku nyar....
Posted by Zaw Htet at 11:13 AM No comments:
"၀မ်းမနည်းပါနဲ့ဟာ၊ ငါ ကြားဖူးတာလေးတခု ပြောပြမယ်၊ ခွဲခွာနေရတာဟာ ဆုံတွေ့နေရတာထက် ပိုကောင်းတယ်တဲ့၊ ဝေးနေရတော့ တနေ့နေ့ ပြန်လည်ဆုံတွေ့ရမှာပဲ ဆိုပြီး မျှော်လင့်နေလို့ရတယ်၊ အတူတူ ရှိနေတာက ခွဲခွာခြင်းအဖြစ် အချိန်မရွေး ပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်တဲ့၊ ဒီလိုပါပဲ၊ မချစ်ဘဲ နေလိုက်တာက သက်သာခွင့် ရနိုင်သေးတယ်၊ ချစ်မိပြီဆိုရင်တော့ ဘယ်တော့များ မုန်းသွားလေမလဲလို့ တထိတ်ထိတ် စိုးရိမ်ပူပန်နေရတတ်တယ်တဲ့"
အချစ်ဟု အဓိပ္ပါယ် သက်ရောက်ခြင်း မရှိစေရ။
Posted by Zaw Htet at 4:56 PM No comments:
Posted by Zaw Htet at 4:16 PM No comments:
Posted by Zaw Htet at 2:42 PM No comments:
Posted by Zaw Htet at 11:01 AM No comments:
Today... I heard that somebody said, am i workaholic? I told him, you're chatkaholic...lol... coz... everytime I saw people, they're busy with chatting....
so, you can ask yourself....
Posted by Zaw Htet at 10:49 AM No comments:
Posted by Zaw Htet at 3:09 PM 1 comment:
ဖုဋ္ဌဿ လောကဓမ္မေဟိ၊ စိတ္တံ ယဿ န ကမ္ပတိ။ အသောကံ ၀ိရဇံ ခေ...